Building Construction and Infrastructure: Domestic Water Supply System: Introduction
Domestic Water Supply System: Introduction
ဖွံဖြိုးတိုးတက် နေတဲ့ နိုင်ငံ တွေမှာ "ရေဆိုတာ Tap လေး ကို လက်လေးနဲ့ အသာဖွင့်လိုက် ရင် ရတာပေါ့။" လို့ ခပ်လွယ်လွယ် ပြောနိုင်အောင် ရေသန့်ဖြန့်ဝေ တဲ့ စနစ် တွေ က လုပ်ဆောင်ပေး နေပါတယ်။
ဒီစနစ် ကို တင်ပြပေးမဲ့ အစီအစဉ် ကတော့
Domestic Plumbing Fixtures
Domestic Cold & Hot Water Supply Systems
System Sizing (Pipe Sizing / Pump Sizing)
System Equipments / Components
Infrastructure ကောင်းကောင်းရှိပြီးသား နေရာတွေမှာ တော့ ရေပေးဝေ ခွင့်ရှိ တဲ့ Utility Company ရဲ့ Source ကနေ သွယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာဒေသ ကို လိုက်ပြီး မိုးရေ၊ ရေတွင်း အမျိုးမျိုး၊ ကန်၊ မြစ်၊ ချောင်း တွေ ကနေ လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီရေတွေ ကို သောက်ရေအဆင့် Potable Water Quality ရအောင်၊ ပိုးမွှားကင်းအောင်၊ သင့်တော်တဲ့ Treatment Process တွေနဲ့ သန့်စင်ပေးရပါတယ်။ Utility Company တွေ က နေ ရေဖြန့်ပေးရင်တော့ ဒီတာဝန် ကို ပါ ယူလေ့ရှိပြီး သောက်ရေအဆင့် ဘယ်လောက် ရအောင် ထိန်းပေး ထားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်အလက် တွေ Water Quality: Characteristics ကိုပေးတတ်ပါတယ်။ (ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပိုက်ထဲကရေတွေ မညစ်ညမ်း ရလေ အောင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ တပ်ဆင်ခွင့် ရှိတဲ့သူ (License Plumbers, etc.) တွေ၊ သုံးနိုင်တဲ့ Pipe & material အမျိုးအစား တွေ နဲ့ Installation practices တွေ စသည်ဖြင့် ကန့်သတ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။)
အဆောက်အအုံ အတွင်း မှာ သုံးတာ က Domestic Cold and Hot Water System လို့ခေါ်တဲ့ လူတွေ သုံးတဲ့ Sanitary Fixtures တွေကို ရေသွယ်ပေးတဲ့ စနစ် နဲ့၊ Process Water လို့ခေါ်တဲ့ စက်ပစ္စည်း တွေ အတွက် သုံးဘို့ ရေသွယ်ပေးရတဲ့ စနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ရေ ကို သောက်လို့ရတဲ့ Potable Water နဲ့ အစားအသောက် အတွက် သုံးလို့ မရတဲ့ Non-Potable Water ဆိုပြီး အဓိက နှစ်မျိုးခွဲခြား နိုင်ပါတယ်။ လူတွေ သောက်ဘို့၊ ရေချိုးဘို့၊ ချက်ပြုတ်ဘို့၊ အစားအသောက် ပြင်ဆင်ဘို့၊ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ဘို့ အတွက် Potable water (သောက်ရေ) ကိုပဲ သုံးစွဲရပါမယ်။ Plumbing Fixtures အားလုံးကို Potable Water ပဲ ပေးရပါမယ်။
Utility Supply Company အနေနဲ့ ပိုက်သွယ်ထားတဲ့ တစ်လျှောက်မှာ ရေတွေ Contaminate မဖြစ်စေဘို့ အတွက် စီမံထားပြီး အဘက်ဘက် က ထိန်းသိမ်း ကြပါတယ်။ Sewer/ Non-potable water ပိုက်အောက်ရောက် မနေအောင်၊ Sewer Pipe နဲ့ သိပ်မနီးအောင်၊ အပြင်က Contaminants တွေ စိမ့်မဝင် လာအောင်၊ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ မြေအောက်မှာ မြှုပ်ထားရတာ မို့ Contamination Source တွေကို မဖြစ်မိအောင် လည်း ဂရုစိုက် ရပါတယ်။
အဆောက်အအုံ ထဲ မှာ လည်း Contamination Prevention ကိုသေချာ ဂရုစိုက်၊ လိုအပ်ချက်တွေ ကို တိတိကျကျ လိုက်နာ ရပါတယ်။ Disinfection of System (Sterilization) ဆိုတာကတော့ ပိုက်ကို ပိုးသတ်တာပါ။ ရေပိုက်တွေ ကို အသစ်ဆင် တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အစုလိုက် လဲတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပြီး မသုံးခင် ပိုးသတ်ရပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ကလိုရင်း ပြင်းပြင်း ခတ်ထားတဲ့ ရေဖြည့် ပြီး ပိုးသတ်တာ ပါ။ ပြီးရင် ပိုက်ထဲ ကို သောက်ရေဖြည့် လိုက်ဆေးလိုက် နဲ့ ကလိုရင်း (သို့) ပိုးသတ် Chemical သောက်ရေ ထဲမှာလက်ခံ နိုင်လောက်တဲ့ အတိုင်းအတာ ပဲ ကျန်တော့တဲ့ အထိ လုပ်ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Appliances တွေ က တစ်ဆင့် အညစ်အကြေးတွေ ဝင်မလာနိုင်အောင် ကာကွယ်ဘို့ အတွက် Back Flow Prevention နည်းစနစ်တွေ ကို လည်း ထည့်သွင်းပေးရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Back-Flow Prevention Devices တွေ နဲ့ Air Gap တွေ ကို အဓိက အသုံးပြု လေ့ရှိပါတယ်။
Water Closet (WC), Urinal Flushing Devices
Wash Basin (Lavatory) Taps
လူနေအိမ် master bath ရေချိုးခန်း တစ်ခုရဲ့ domestic water supply schematic ကိုအောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီပုံမှာ Pipe size တွေကို mm နဲ့ပြထားပါတယ်။
Water Closet (WC), Urinal Flushing Devices Flushing Devices (ရေလောင်းတဲ့ ကိရိယာတွေ)
WC (or) Urinal တွေကို flush လုပ်ဘို့ အတွက် သုံးလေ့ရှိတဲ့ Flushing Devices တွေကတော့
Flushometer Valves လို့လည်း ခေါ်လေ့ ရှိတဲ့ Flush Valves တွေကို Public Use (Offices, Public Toilets, etc.) တွေမှာ သုံးရပါတယ်။ ရေကို Distribution Pipes ကနေ တိုက်ရိုက် အလုံးအရင်း နဲ့ ဆွဲ သုံးမှာ မို့ Flush Valve တွေကို ပေးတဲ့ ပိုက် (Distribution Pipes) တွေ က Flushing Cistern တွေ ကို ပေးတဲ့ ပိုက်တွေ ထက် အရွယ်အစား ကြီးလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒီ Fixtures တွေ က သန့်ရှင်းရေး နဲ့ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက် အထူး ဂရုစိုက် ရတဲ့ Fixtures တွေပါ။ အညစ်အကြေး တွေ ရေပိုက် ထဲ လုံးဝ ဝင်ရောက် မလာနိုင်ဘို့ Backflow prevention အတွက် Air Gap (or) Vacuum Breaker ပါရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Flush လုပ်ဘို့ သာမန် Valves တွေနဲ့ ပိုက်နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်ခွင့် မရှိပဲ စိတ်ချရတဲ့ Air Gap (or) Vacuum Breaker တွေပါဝင် တဲ့ Cistern (or) Flushometer Valves တွေနဲ့ပဲ ဆက်ပေးရပါတယ်။
မျက်နှာသစ် ဘို့၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ဆေးဘို့ သုံးရတဲ့ ကြွေခွက် ပါ။
Wash Basin Lavatory Wash Basin with Pedestal
သူ့အတွက် သုံးမဲ့ faucet (tap) တွေအတွက် ရေပူ၊ ရေအေး ရောပေးတဲ့ Mixer Type (or) ရေအေးတစ်မျိုးထဲ ပဲ ပေးတဲ့ Tap လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Mixer Type မှာမှ Lever တစ်ခုထဲ နဲ့ Flowrate ရော ရေပူ၊ ရေအေး စပ်တာ ကို ပါ သုံးနိုင်တဲ့ Single-Lever Type ရှိနိုင်သလို တစ်ခုစီ ထိန်းဖွင့်ရတဲ့ အမျိုးအစား လည်း ရှိပါတယ်။
စကာင်္ပူ၊ မလေးရှား လို Tropical Countries တွေ မှာတော့ သာမန် အများသုံး Public အိမ်သာ တွေမှာ ရေအေး ကိုပေးရင် လုံလောက်ပါတယ်။ အိမ်တွေ မှာ ကတော့ သုံးစွဲသူ အိမ်ရှင် အကြိုက် Mixer ဖြစ်ဖြစ်၊ Tap ဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
စကာင်္ပူ နိုင်ငံ မှာ ရေကို ချွေတာ ဘို့ အတွက် လူနေအိမ် မဟုတ်တဲ့ Non-domestic Premises နေရာတွေ က Toilet/ Washroom တွေ အားလုံး က Wash Basins (Lavatory)တွေမှာ သူ့အလိုလို ပိတ်သွားမဲ့ self-closing delayed-action taps တွေ နဲ့ ရေထွက်အား ကို ထိန်းချုပ်ဘို့ Constant flow regulator တွေ ကိုထည့်ပေးရပါတယ်။
အချို့ Mixer တွေက Individual Valve control နဲ့ ရေပူရေအေး ညှိထုတ် ယူ နိုင်သလို Single Lever Mixer လို့ခေါ်တဲ့ Lever တစ်ခုထဲ နဲ့ ရေအနည်းအများ ရော အပူအအေး ပါထိန်း နိုင် တဲ့ mixer တွေလည်း ရှိပါတယ်။
Shower ဆိုတာကတော့ ရေချိုးစရာ ရေပန်းကို ခေါ်တာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ သလို Bath Mixer နဲ့ တွဲထား တတ်ပါတယ်။
Shower control valve အနေနဲ့ သာမန် Hot water သုံးတဲ့ Mixer Type, Instant Heater Type နဲ့ Cold water ရိုးရိုးပဲ သုံးတဲ့ shower control valve တွေ ရှိသလို Control တွေ ရှုတ်ထွေးနေအောင် ပါဝင်တဲ့ Shower တွေလည်း ရှိပါတယ်။
Shower Head အနေနဲ့ လည်း ရိုးရိုး၊ Multi-Pattern ( Shower Head ကို လှည့်လျင် Spray Pattern ဥပမာ၊ ၊ Rain, Massage, Mist စသည်ဖြင့် ပြောင်းသည်။ )၊ Rain Dance စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Shower Head (ရေပန်းခေါင်း) ရဲ့ အရွယ်အစား က လည်း ဒီဇိုင်းပေါ် လိုက်ပြီး အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို လိုအပ်မဲ့ Water Pressure (ရေဖိအား) နဲ့ Flowrate (ရေထွက်အား) တွေ က လည်း အမျိုးမျိုး ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံ တော်တော် များများ မှာ Shower နဲ့ပတ်သက်ပြီး Water conservation (ရေချွေတာရေး) သတ်မှတ်ချက် တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ (ဥပမာ။ ။ စကာင်္ပူ နိုင်ငံ မှာ ရေကို ချွေတာ ဘို့ အတွက် လူနေအိမ် မဟုတ်တဲ့ Non-domestic Premises နေရာတွေ က Toilet/ Washroom တွေ အားလုံး က Showers တွေမှာ သူ့အလိုလို ပိတ်သွားမဲ့ self-closing delayed-action taps တွေ နဲ့ ရေထွက်အား ကို ထိန်းချုပ်ဘို့ Constant flow regulator တွေ ကိုထည့်ပေးရပါတယ်။)
Sink ဆိုတာ ကတော့ အသီးအရွက်၊ သားငါး၊ အိုးခွက်ပန်းကန် ဆေးကြောဘို့၊ စက်ရုံတွေ မှာ ဆိုရင်လည်း ကုန်ပစ္စည်း ဆေးကြောဘို့ သုံးတဲ့ ဇလားပါ။
အမှိုက်သိမ်း တဲ့ သူတွေ တံမျက်စီး၊ အဝတ် စတာတွေ ဆေးကြောဘို့ သုံးတဲ့ Sink ကိုတော့ Mop-Sink, Janitor Sink, Maid Sink စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် တတ်ကြပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ faucet ကတော့ လည်တံရှည် လှည့်လို့ရတဲ့ goose neck ပုံစံပါ။
Domestic Cold Water Supply System
သာမန် အပူချိန် မှာရှိနေတဲ့ ရေကို ပဲ Cold water လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရေခဲရေ မဟုတ်ပါဘူး။Drinking (သောက်ဘို့၊), cooking(ချက်ပြုတ်ဘို့၊), bathing (ချိုးဘို့၊), washing (ဆေးကြောဘို့၊ လျှော်ဖွတ်ဘို့၊), flushing(အိမ်သာရေလောင်းဘို့၊), recreation (အပန်းဖြေဘို့ ဥပမာ၊ ရေကူးကန်၊), irrigation (အပင်တွေ ရေလောင်းဘို့။), အစရှိသဖြင့် အသုံး ပြုကြပါတယ်။
Water Distribution System ကို ဒီဇိုင်း လုပ်တဲ့ အခါ နိုင်ငံအလိုက် ခွင့်ပြုထားတဲ့ Engineering Practices တွေ နဲ့ ကိုက်ညီအောင် လိုက်နာ ရပါတယ်။ Pipe Sizes ရွေးတဲ့ Methods တွေက လည်း approved ဖြစ်နေဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Hot Water ရော Cold Water ပါ လိုအပ်တဲ့ Fixture တစ်ခုမှာ ပိုက်နှစ်ခု က Interconnected ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီပိုက် တစ်ခုကနေ အခြားတစ်ခု ထဲ ရေစီးမသွားနိုင်အောင် Fixture မှာဒီဇိုင်း လုပ်ထားရပါတယ်။
ဒီ Water Supply System တွေ ကို မလေ့လာခင် အရင် ရေးထားဘူးတဲ့ Sanitary Plumbing: Introduction ကို ဖတ်ကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ရေပေးရတဲ့ Plumbing Fixture တိုင်းမှာ ရေစွန့်ထုတ် ဘို့ လိုအပ်တာ မို့ပါ။ အဝင်ရှိရင် အထွက် ရှိရမယ် မဟုတ်လား။
Water Distribution System Design Criteria တွေကတော့
Backup Storage to prevent Interruption
Assessment of Demand Calculations
Distribution: Mode of Supply
Equipment and Pipe Sizing နဲ့
Water Quality: Hygienic, Clean, prevention of contamination
Corrosion Preventionတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Engineer/Designer တွေ တွက်ချက် ခန့်မှန်း ရမဲ့ အချက်တွေ အတွက် မေးခွန်းတွေ ကတော့
တစ်နေ့ ကို ရေဘယ်လောက် သုံးမှာလဲ၊ cubit meters ဘယ်လောက်၊ ဂါလံဘယ်လောက် ကုန်မှာလဲ။
Storage Tank ထဲမှာ ရေဘယ်လောက် လှောင်ထားဘို့ လိုအပ်သလဲ။
အသုံးအများဆုံး အချိန်တစ်ခု မှာ တစ်မိနစ် ကို ဘယ်နှဂါလံ၊ ဘယ်နှ လီတာ လောက် သုံးအား ရှိသလဲ။
ရေဖိအား ဘယ်လောက် လိုမှာလဲ။
ပိုက်အရွယ် ဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲ၊
What are the major components in the water supply system?
Storage Cisterns (Tanks) and Accessories
Valves (Control valves, check valves, etc.)
Assessment of Daily Demand
ဇိမ်ခံသုံး မဟုတ်တဲ့ ပုံမှန် လူတစ်ဦး အတွက် တစ်နေ့တာ ပျမ်းမျှ လိုအပ်ချက်ခန့်မှန်း နိုင်ဘို့ မှီငြမ်းစရာ ဇယားကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အဆောက်အအုံ အမျိုးအစား လူတစ်ဦး တစ်နေ့စာ
လူနေအိမ်များ 150 (40)
အဆောင် 90 (25)
ဟိုတယ် 135 (36)
ကန်တင်း မပါသော ရုံးခန်း 35 (10)
ကန်တင်း ပါသော ရုံးခန်း 45 (12)
ကျောင်းများ 15 (4)
1 USgal = 3.785 litres
1 UK gal (Imp Gal) = 4.546 litres
ဒီလိုအပ်ချက်တွေ က နေရာဒေသ ကိုလိုက်ပြီး လိုအပ်ချက် က ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ မလေးရှား နိုင်ငံ မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ ဇယား ကို တော့ အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်။
Sr Type Capacity / Unit
a. Low Cost Residential 680
b. Medium Cost Residential 1,000
c. Terrace House / Condominium 1,500
d. Semi-Detach up to4rooms
(additional rooms shall be 450 l/room) 1,500
e. Shop House (single storey) 2,000
f. Multi-Storey Shop House 1,500
g. Offices – 100 m2 800
h. Petrol Kiosk (with washing facility) 50,000
i. Petrol Kiosk (without washing facility) 10000
j. Hotel (Each Room) 1,500
k. Shopping center – 100 m2 1,000
l. Light Industry 1,500
m. Industrial Area (As requirement)
n. Hospital / bed 1100
o. Wet Stall 1,360
p. Dry Stall 450
နိုင်ငံတစ်ကာ မှာ Operate လုပ်နေတဲ့ ဟိုတယ် တွေ မှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လိုအပ်ချက် ရှိတတ် ပါတယ်။
စက်ရုံ အလုပ်ရုံ ဆိုရင် တော့ Owner/Client ဆီကနေ အချက်အလက် တွေ တောင်းယူဘို့ အများအားဖြင့် လိုအပ်လေ့ရှိ ပါတယ်။
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Service interruption ဖြစ်ခဲ့ရင် အများအားဖြင့် တစ်ရက် အတွင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန် အောင် ပြုပြင် နိုင်လေ့ ရှိတာမို့ Storage Capacity ကလည်း 1 day capacity (တစ်ရက်စာ ပဲဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။)
Daily Demand ကို ခန့်မှန်းလို့ ရပြီ ဆိုရင် တော့ Water Tank အရွယ်အစား နဲ့ နေရာ ရွေးချယ် ဘို့ အဆင့်ကို ရောက်လာပါပြီ။
Water Tank (ရေကန်) တွေ ကို အရွယ်အစား မရွေးချယ်ခင် အသုံးပြုမဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တွေ ကို စဉ်းစားရပါတယ်။ ဒါတွေ ကတော့။
Incoming (Acceptance Purpose): ရေပေးတဲ့ ဌာန ကနေ တိုက်ရိုက်လက်ခံ နိုင်တဲ့ Water Tank ပါ။
Storage Purpose: Appliances တွေ ကို Gravity နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Pump နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြန့်ဝေပေးဘို့ ရေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ ရေကန်ပါ။
Transfer Purpose: အမြင့်မှာ ရှိတဲ့ Water Tank တစ်ခုခု ဆီိ ကို တစ်ဆင့် လွှဲပြောင်း ပို့လွှတ်ပေးဘို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပမာဏ။
Purpose တစ်ခုပဲ ရှိတဲ့ Water Tank တွေရှိသလို၊ နှစ်ခု နဲ့ သုံးခုစလုံး အတွက် သုံးတဲ့ Water Tank တွေ လည်းရှိပါတယ်။
အများအားဖြင့် Domestic Water Tanks တွေ အားလုံးမှာ သိုလှောင်ထားရမဲ့ Total Storage Capacity က တစ်ရက်စာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်း စီရဲ့ Capacity ကတော့ Tank ကနေဖြန့်ဝေရမဲ့ Demand Capacity နဲ့ Transfer Pumps တွေရဲ့ Capacity တွေပေါ်မူတည် ပြီး ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ Utility Company တွေကလည်း Guidelines တွေ ပေးထားတတ်ပါတယ်။
Guidelines တွေ မရှိတဲ့ အခါ မှာ ရွေးချယ် ဘို့ (Safety Side) ကတော့
Transfer Purpose: 1/3 of one day capacity
Storage Purpose: One day capacity
စကာင်္ပူ နိုင်ငံ Handbook on Application for Water Supply: 5th Edition: 2009 မှာပေးထားတဲ့ Guidelines အရ က တော့
Transfer Purpose (R.L 125m < Break Tank Inlet < R.L 130m ) : 1/5 of one day capacity
Transfer Purpose (R.L 130m < Tank Inlet < R.L 137m ) : 1/3 of One day capacity
Storage Purpose: Tank Inlet < R.L 125m : Recommended One day capacity (OR Owner Decide Lesser Capacity and Undertake)
Storage Purpose: Tank Inlet > R.L 125m : One day capacity
အချို့ဒေသ တွေ မှာ Fire Protection Purpose အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေကို ပါ Domestic water Tank ထဲမှာ ပေါင်းထည့်တာ ကို လက်ခံတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေကန်ကနေ Domestic water ထုတ်သုံးတဲ့ အခါ Fire Fighting အတွက် လိုအပ်တဲ့ Fire Reserve အမြဲတမ်း ကျန်နေအောင် ဒီဇိုင်း လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ (Domestic Application အတွက် ရေ ကို Fire Reserve အထက် က ပဲ ထုတ်ယူ ရပါမယ်။)
Water Tank တွေရဲ့ အကြောင်း ကို စာရေးသူ ရဲ့ အခြား Blog Post: Water Tanks ( ရေကန် များ ) မှာ ဆက်လက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
တပ်ဆင်ပေးမဲ့ Water Meter Size (ရေမီတာ အရွယ်အစား) ကိုလည်း လစဉ်ရေသုံးစွဲမှု ကိုလိုက်လို့ စကာင်္ပူမှာ ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
Table: Recommended Size of Meters based on Monthly Consumption
Size of Meter (mm) 15 25 50 100 150
Recommended Maximum Consumption (m³/month) 130 700 5,000 20,000 45,000
* ရေမီတာ အရွယ်အစား ကို လိုက်လို့ ဖြတ်စီးတဲ့ Water Flowrate ရေစီးနှုန်း နဲ့ Pressure Loss ပမာဏတွေ ရှိသေးတာမို့ ရေမီတာ အရွယ်အစား နဲ့ တိုက်ရိုက်ပေးထားတဲ့ ရေစီးနှုန်း ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တတ်ဘို့ မမေ့ပါနဲ့။
Flow Pressure (ရေဖိအား လိုအပ်ချက်။)
Domestic Plumbing Fixtures အများစု က Pressure 8 psi ( 5.6mAq or 0.55 bar) လောက်မှာ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ် နိုင်ပါတယ်
Flushometer Valve တွေသုံးတဲ့ Water Closet, Urinal Bowls တွေဆိုရင် တော့ အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက်က 15-25 psi ( 10.5-17.6mAq or 1-1.7bar) လောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Rain Shower လို Fixture တွေဆိုရင် တော့ 60 psi (4 bar) လောက်တောင် လိုကောင်း လို နိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ အနေ နဲ့တော့ ထူးခြားတဲ့ Pressure Requirements လိုအပ်ချက်တွေ မပါတဲ့ အခြေအနေ မှာ Pressure at Fixture မှာ 1.5 bar-3.5 bar ( 20 – 50 psi ) လောက် အတွင်း ရအောင် ဒီဇိုင်းလုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ 1.5 bar အောက်ဆိုရင် တော့ Booster Pumps နဲ့ Pressure ကိုမြှင့်ယူပြီး 3.5bar ထက် ကျော်နေရင် တော့ Pressure Reducing Valve နဲ့ ထိန်းပေးရပါတယ်။
ဒီနေရာ မှာ Elevated Tank ကနေ ကျလာမဲ့ Gravity Flow အတွက် ဆိုရင် တွက်ချက်ရမဲ့ Hydrostatic Pressure (Water Head) ကို လည်း သိထား စေချင် ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်လို့ရတာ က လိုချင်တဲ့ အမှတ် ကနေ ရေမျက်နှာပြင် အထိ အမြင့်ပါ။ ရေကန်ရဲ့ ရေ Level ရဲ့အောက် ဘယ်လောက်ရှိ သလဲ ဆိုတာ ကို 15mH2O (15m aq), 15 ft H2O, စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။ SI unit မှာတော့ 1 bar = 100 kPa = 10.19m ခန့်ရှိတာ မို့ အကြမ်းတွက်တဲ့ အခါ 1bar ကို 10m H2O လောက် ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် 1.5 bar – 3.5 bar ဆိုရင် အမြင့် 15m ကနေ 35m အတွင်းလို့ အကြမ်းအားဖြင့် သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ ရေကန်ရဲ့ ရေအမြင့် က Top Level နဲ့ Low Level အတွင်းမှာ အနိမ့်အမြင့် ရှိနေနိုင်တာ ကိုပါ သတိထား ထည့်စဉ်းစားပေးဘို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Determining Mode of Supply (ရေဖြန့်ဝေ နည်းလမ်း ရွေးချယ် သတ်မှတ် ခြင်း၊ )
Water Pressure: ရရှိနိုင်တဲ့ ရေဖိအား နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ရေဖိအား အပေါ်မှာ ချင့်ချိန်ပြီး ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြန့်ဝေပေးမှာလဲ စဉ်းစားပေးရပါတယ်။ ပေးလေ့ရှိတဲ့ နည်းသုံးမျိုး ကတော့။
Booster Pumps Feed
Utility Main ကနေ ရေကန်တစ်ခုခု ကို မဖြတ်ပဲ တိုက်ရိုက် သွယ်ယူသုံးစွဲ တာကို ခေါ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ Pressure ကိုရနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချက်နှစ်ချက် လိုအပ်ပါတယ်။
Utility Company ကနေ လိုအပ်တဲ့ Pressure ကိုပေးနိုင်တဲ့ အမြင့် အတွင်းမှာရှိရမယ်။
Utility Company က တိုက်ရိုက်သွယ်ယူ နိုင်ကြောင်း လည်း တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုထား ပေးရပါမယ်။
စကာင်္ပူ နိုင်ငံ မှာတော့ PUB ကိုယ်ပိုင် Booster Pumping Stations တွေရှိတာမို့ ဒီလို တိုက်ရိုက်သွယ်တာ ကို Reference Sea Level + 25m (125 m Reduce Level) အထိ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ (Ref: Water Supply Handbook (or) CP48: 2005) ဒါပေမဲ့ Flush Valve တွေကိုတော့ CP48 အဟောင်းမှာ Reference Sea Level + 10m အောက်မှာပဲ ရှိမှပဲ တိုက်ရိုက် ပေးသင့်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ CP48:2005 မှာတော့ အကြမ်းအားဖြင့် Reference Sea Level + 15m (115m R.L) အောက်မှာ ဆိုရင် တိုက်ရိုက် ပေးဘို့ စဉ်းစား နိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ရေကန်တွေ ကိုတော့ အမြင့်ဆုံး Highest Fittings < 137m Reduced Level အောက်ဆို တိုက်ရိုက် ပို့လွှတ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ မှာ တော့ ဒီလို တိုက်ရိုက်ဆက်ခွင့် ရဘို့ မလွယ်ပါဘူး။ အများအားဖြင့် Via Water Tank Method ကိုပဲ သုံးရလေ့ ရှိပါတယ်။ Kitchen/Canteen Sink အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ တိုက်ရိုက် ဆက်ခွင့်ပြုတတ်ပေမဲ့ ရှားပါတယ်။
ရေကန် က နေ Gravity ဖိအားနဲ့ ပေးတဲ့ နည်းလမ်းပါ။
လိုအပ်တဲ့ Pressure ရဘို့ အတွက် သင့်တော်တဲ့ အမြင့် မှာရှိနေဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အမြင့်က သိပ်ကွာနေ လို့ Pressure အရမ်းများ နေရင်တော့ Pressure Reducing Valve သုံးရပါမယ်။
လိုအပ်တဲ့ Pressure ရဘို့ အတွက် သင့်တော်တဲ့ အမြင့် မရနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မှာ Pump အကူယူ ပြီး Pressure Boosting လုပ်ရတာမို့ Booster Pump Feed လို့ခေါ်တာပါ။
သုံးစွဲတဲ့ ရေအားက အမြဲတမ်း ပြောင်းနေလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအနည်းအများ အခြေအနေ ကို ကာမိစေဘို့ နဲ့ Pump ခန ခန Start/Stop မဖြစ်စေဘို့ Hydro-pneumatic tank လို့ခေါ်တဲ့ လေအိုး ကိုလည်း တွက်ချက် တပ်ဆင်ပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။
Assessment of Required Flowrate
ရေသုံးအား ဘယ်လောက် လိုမလဲ ဆိုတာ ကို ခန့်မှန်း နိုင်ဘို့ အတွက် assessment လုပ်တဲ့ အခါ fixture တစ်ခုချင်းစီ ရဲ့ လိုအပ်ချက် ကို သိရှိထားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Table: Recommended minimum rates of flow of various appliances or fittings
Outlet fitting Rate of flow
WC flushing cistern, float operated valve 0.1 (1.6) per WC served
WC flushing trough, float operated valve 0.15 (2.4) per WC served
Spray tap or spray mixer tap 0.04 (0.63) per tap
Wash basin tap 0.15 (2.4) hot or cold
Bath tap nominal size 3/4-in 0.3 (4.75) hot or cold
Bath tap nominal size 1-in 0.6 (9.5) hot or cold
Shower head 0.15 (2.4) hot or cold
Sink tap nominal size 1/2-in 0.2 (3.2) hot or cold
Sink tap nominal size 3/4-in 0.3 (4.75) hot or cold
Sink tap nominal size 1-in 0.6 (9.5) hot or cold
Urinal flushing cisterns served 0.04 (0.63) per position
Water Closet, Flushometer Valve 2.2 (35) see note 3
Urinal, Flushometer Valve 1.6 (25) see note 3
ရေပူရေအေး ရောပေးတဲ့ mixer တွေကနေ ဆွဲယူတဲ့ နှုန်းက ပုံမှန် taps နှစ်ခု ကနေထွက်တာထက်စာရင် နည်းပါတယ်။ ဒါကို Pipe Sizing လုပ်တဲ့ အခါ ထည့်မစဉ်းစားရပါဘူး။
Shower တွေရဲ့ လိုအပ်ချက် က manufacturer နဲ့ design ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်ချက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ Rain Shower လို fixture မျိုးက သာမန် Shower ထက် flow rate ရော pressure လိုအပ်ချက်ပါ အဆပေါင်း များစွာ ပိုများတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်ရင် supplier ကို မှီငြမ်းပါ။
ဒီ Flushometer Flowrate တွေက စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းကျတဲ့ နှုန်းပါ။ တစ်ကြိမ် မှာသုံးမဲ့ ရေပမာဏ Flow/Flush ကိုလည်း ကန့်သတ် ထားပါသေးတယ်။ US Energy Policy Act အရ WC: 1.6 gal/flush နဲ့ Urinal က 1.0 gpm/flush ပါ။ Singapore CP48: WC: 4.5 L/flush နဲ့ UR: ကတော့ Size အရွယ်အစား ကိုလိုက်ပြီး small 0.5 l/flush, medium 1.0 l/flush & large 1.5 l/flush ထက်မကျော်ဘို့ ကန့်သတ် ထားပါတယ်။ Water efficiency ကို လူတွေ အာရုံစိုက်လာတာ နဲ့ အတူ ပိုမို တင်းကျပ်တဲ့ ကန့်သတ်မှု တွေ လုပ်လာဘို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။
စက်ရုံ အလုပ်ရုံ နဲ့ အခြား applications တွေအတွက် လိုအပ်ချက် ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင် Client နဲ့ ညှိနှိုင်း ခန့်မှန်း ရပါမယ်။
Assessment of Probable Demand (ရေလိုအပ်ချက် ကို ခန့်မှန်း ခြင်း၊ )
Cold & Hot water Installation လုပ်တဲ့ အခါ ရှိတဲ့ Fixtures တွေ အားလုံး တပြိုင်နက်တည်း simultaneously သုံးစွဲ နေတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Economy ဖြစ်ဘို့အတွက် usual design practices ကတော့ ဒီ simultaneous usage က maximum possible ထက် များစွာလျော့နည်း ပါတယ်။
ဒီ simultaneous usage ကို Loading Unit concept (or) similar approach နဲ့ တွက်ချက် ခန့်မှန်း ကြပါတယ်။ L.U Method နဲ့ခပ်ဆင်ဆင် တူတဲ့ Fixture Unit Method ကို ASHRAE နဲ့ U P C တို့က သတ်မှတ် ပေးထားပါတယ်။
Loading Unit နည်း နဲ့ တွက်ချက်တဲ့ အခါ သုံးတဲ့ LU ပမာဏ ကို အောက်က Table မှာ ဖေါ်ပြထား ပါတယ်။
WC flushing cistern 2
Wash basin (Lavatory) tap (Domestic) 1.5
Wash basin (Lavatory) tap (Public) 2
Wash basin (Lavatory) tap (Concentrated) 3
Bath tap nominal size 3/4-in 10
Bath tap nominal size 1-in 22
Sink tap nominal size 1/2-in 3
Sink tap nominal size 3/4-in 10
Spray tap 0.5
ဒီ နည်းနဲ့ တွက်တဲ့ အခါ
Wash Basin (Lavatory) faucet တွေအတွက် တွက်ချက်တဲ့ အခါ Domestic, Public နဲ့ Concentrated Use ရယ်လို့ သုံးခုခွဲ ပြထားပါတယ်။ စာသင် ကျောင်းလို၊ စက်ရုံလို Peak Period (ဥပမာ၊ ၊ ထမင်းစား ဆင်းခါစ) လူအရမ်းများတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခါမှာ Concentrated Use ကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။
WC Flush Valves တွေ အတွက် ဒီ နည်းနဲ့ တွက်လို့ မရပါဘူး။ WC Flush Valves တွေ အတွက် ခန့်မှန်းတဲ့ နည်းကို နောက်မှာ ဆက်လက် ဖေါ်ပြ ပေးထား ပါတယ်။
Water Supply Pipe Main / Branch တစ်ခုကနေ ပေးရမဲ့ Appliance တစ်ခုစီရဲ့ Quantity နဲ့သက်ဆိုင်ရာ LU တွေကို မြှောက်ပြီး Total LU ကို ရှာရပါမယ်။ ပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာ Pipe Friction Chart တွေ ကို သုံးပြီး Flowrate နဲ့ Pipe Size ကို ရွေးချယ် နိုင်မှာပါ။
Flush Valves တွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ တွက်နည်း တစ်ခုကို စကာင်္ပူ CP48 : 1989 မှာ ဖော်ပြ ထားခဲ့ဘူး ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ထုတ်တဲ့ အခါမှာ တော့ ဒီအခန်း ပါမလာတော့ ပါဘူး။
Flow Rate Requirement (as number of flush in simultaneous use)
Flush Valves on Line No. of flush in simultaneous use
3 to62 3
7 to 1134
12 to 1545
16 to 3556
36 to 4557
46 to 5058
51 to 7059
71 to 10069
101 to 200 10 14
Group A : Offices, Hotels and Hospitals
Group B : Schools and Other Premises where Rest Period Create Extra Ordinary Demands
ရလာတဲ့ No. of Flush in simultaneous Use ကို တစ်ခုစီ ရဲ့ Flowrate အနည်းဆုံး 1.5 L/s နဲ့ မြှောက်ရင် လိုအပ်တဲ့ Flowrate in supply pipe ကို ခန့်မှန်းလို့ ရပါလိမ့်မယ်။
ASHRAE Method: Fixture Unit နဲ့တွက်တဲ့ အခါမှာတော့ Flush Valve နဲ့ Flush Tank တွေရဲ့ Fixture ယူနစ် က မတူသလို အသုံးပြုမဲ့ နေရာ (Public or Private) ပေါ်မူတည်ပြီး လည်းထပ်ကွဲ ပါသေးတယ်။ ဒါတင်မက Fixture Unit 1,000 ထက်မပို တဲ့ အခါ Estimate Curves for Demand Load Chart မှာ လည်း Flush Valve နဲ့ ဖြစ်တဲ့ အပေါ်မူတည် ပြီး ဖတ်ရမဲ့ Curve က မတူတာ ကိုပါ သတိပြု စေချင် ပါတယ်။
Pipe Sizing (ပိုက်အရွယ် အစား ရွေးချယ်ခြင်း)၊
Total LU ကို ရှာပြီးတဲ့ အခါ သက်ဆိုင်ရာ Pipe Friction Chart တွေ ကို သုံးပြီး Flowrate နဲ့ Pipe Size ကို ရွေးချယ် ဘို့အဆင့် ကိုရောက်ပါပြီ။ ဒီလို ရွေးချယ်နိုင်ဘို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ Chart တစ်ခု ကို အောက်မှာ နမူနာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ သတိပြုရမှာ က Pipe material (or) Standard မတူရင် Friction Chart လည်းတူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အောက်မှာ နမူနာ ဖော်ပြထားတဲ့ Chart ကတော့ Copper Tube to BS2871, Table X အတွက်ပါ။
BS 1387 Galvanized Steel
ပထမ 30-50mm H2O အတွင်းမှာ ရှိစေပြီး Velocity ကိုတော့ 0.75 to 2.5 m/s အတွင်း (ပုံမှာ အစိမ်းရောင်ခြယ်ထားတဲ့ ဧရီယာ အတွင်း) မှာ ထားပြီး ရွေးချယ် သင့်ပါတယ်။ Friction ကတော့ Pump Head (or) Pressure Loss ပေါ်အကျိုးသက်ရောက် ပါတယ်။ Velocity < 0.75 m/s ဆိုရင် အထဲမှာ ခိုနေတဲ့ လေတွေ ကို တွန်းထုတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 2.5 m/s ကျော်လာရင် တော့ Flow noise အပြင် Water hammer ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ Shock Vibration & Noise ပြဿနာ ကိုပါ ဖြေရှင်းရ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
စာရေးသူ ကတော့ Friction Loss 40mmAq/m ( 4ft / 100ft ) နဲ့ Flow Velocity ကို 1 to 1.5 m/s (3 to5ft/s) လောက်မှာ ထားပြီး ရွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ အခါ အလွယ်တကူ အသင့် သုံးနိုင်တဲ့ ဇယားတစ်ခု ကို ဒီလို ရနိုင်ပါတယ်။
Copper Tube BS2871 Table X
(mm) L.U. Flowrate
L/s ( L/min ) gpm (U.S.)
1530.15 (9) 2.4
22 12 0.34 ( 20 ) 5.3
28 30 0.58 ( 35 ) 9.2
35 65 0.92 ( 55 ) 14.5
42 115 1.4 ( 86 ) 22.6
54 300 2.9 ( 174 ) 46.0
67 630 5.0 ( 300 ) 79.4
76 900 6.5 ( 390 ) 103
108 2,800 14.0 ( 840 ) 222
133 5,000 21.0 ( 1,260 ) 333
159 8,000 30.0 ( 1,800 ) 476
Pipe Dia Flowrate Velocity
(in) (mm) S.I ( l/min ) I.P. ( USgpm ) ( m/s ) (ft/s)
1/2 1592.4 1.0 3.0
3/4 20 18 4.8
1 25 30 8.0
1 1/4 32 54 14.5 1.1 3.5
1 1/2 40 84 22.0 1.2 4.0
2 50 150 40.0 1.4 4.5
2 1/2 65 300 80.0 1.5 5.0
3 80 420 110.0 1.5 5.0
4 100 780 200.0
5 125 1200 320.0
6 150 1620 430.0
8 200 3000 800.0
ရွေးချယ်တဲ့ အခါ သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံ တွေ ကို MEP Basic Calculations: Pipe & Duct Sizing[ http://chawlwin.blogspot.com/2008/08/pipe-sizing-duct-sizing.html ] မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Pump Size ရွေးချယ်တဲ့ အခါ အဓိက Parameters နှစ်ခု ရှိပါတယ်။
Transfer Pump အပေါ်ကန် ကို (ဒီအတိုင်း အလွတ်ဖြည့်ရင်) ဘယ်နှနာရီ အတွင်း ပြည့်အောင် ဖြည့်မယ် ဆိုတဲ့ အချက် ကို အခြေခံပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ရက်စာ ရေပမာဏ ကို ဘယ်နှနာရီ အတွင်း ပြည့်အောင် ဖြည့်မယ် ဆိုတဲ့ အချက် ကို လည်း အခြေခံနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၁ နာရီ ထက် မလျော့သင့်ပါဘူး။
တစ်ရက်စာ ခံတဲ့ အပေါ်ကန် ကို ဖြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အေးအေးဆေးဆေး 12 နာရီလောက် အထိ ထားပြီး ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ 6-8 hours ကတော့ သင့်တော်ပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် Power Interruption အခြေအနေ မှာ Generator backup လုပ်တာနဲ့ ညှိပြီး တွက်ရတဲ့ အခါမှာပါ။)
Pump Head = Static Head + Friction / Dynamic Losses
ပုံမှန် ကတော့ Friction Losses တွေကို အသေးစိတ် တွက် ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်အရွယ်အစား ကိုလည်း အပေါ်မှာ ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း 40mmAq/m အတွင်းထားပြီး ပိုက် အကွေးအကောက် နဲ့ Horizontal Run သိပ်မရှည်လွန်းရင် အကြမ်းအားဖြင့် Static Head ထက် 10-15% ပိုထားလိုက်ရင် အဆင်ပြေ လေ့ရှိ တတ်ပါတယ်။
Flowrate: Probable Max. Demand
Pump Head: To achieve min. pressure at use point
Pneumatic Tank: To limits maximum start/stops per hour
Hot-water Circulation Pumps
Flowrate: To maintain water temperature
Pump Head: To overcome friction loss (Static Loss, not important)
အရည် အမျိုးမျိုး ကို တွန်းပို့ ဘို့ အတွက် Pump ကို သုံးရပါတယ်။ Domestic Cold & Water Supply Systems မှာ အသုံးများတဲ့ Applications တွေကတော့။
Transfer / Pump-ups: တစ်နေရာ က နေ တစ်နေရာ ကို မောင်းတင် ပို့ဘို့။ အောက်မှာ ရှိတဲ့ ရေကန် က နေ အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ရေကန် ကို ရေ မောင်းတင် ဘို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Pressure Boosting: လိုအပ်တဲ့ ဖိအား Pressure ရအောင် မြှင့်တင်ပေးဘို့။ ကန်အမြင့် က Appliance အထက် လိုသလောက် အမြင့် မရှိတဲ့ အခါ လိုအပ် တဲ့ ဖိအားရအောင် မြှင့်တင်ပေးဘို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Re-Circulation အရည်တွေ ကို ပိုက်တွေ Equipments တွေကြား Closed-loop လည် ပြီးစီးနေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ဘို့။ ဒါကိုတော့ Hot water circulation အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ Pumps အမျိုးအစား ကတော့ Centrifugal Pumps ပါ။ သူ့မှာမှ သုံးရမဲ့ လိုအပ်ချက် ကို လိုက်လို့ Inline, Vertical, Split Case, Multi-stage စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ထပ်ကွဲ နိုင် ပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Pump Systems တစ်ခု အတွက် အနည်းဆုံး ပါဝင်ရမဲ့ Pipe Fittings တွေ ကို အောက် မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီ Fitting Arrangement (အစီအစဉ်) က Construction Industry ကို စဝင် ကတည်းက အလွတ်ရ နေရမဲ့ ပုံပါ။ စာဖတ်သူ လည်း Construction Industry မှာ mechanical services လုပ်မယ် ဆိုရင် မသိမဖြစ် သိနေရပါမယ်။
တစ်ခုစီ ကို လေ့လာကြည့်ရင်
Gate Valves (or) Isolation ValvesPump (သို့) Fitting တစ်ခုခု ကို Maintenance လုပ်စရာ ရှိရင် ပိတ်ထားနိုင်ဘို့ ပါ။ Throttle လုပ်ဘို့တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။
Strainer ကတော့ ရေထဲမှာ ပါလာမဲ့ ခဲသလဲ၊ အမှိုက်တွေ ကြောင့် Pump မပျက်စီး ရအောင် တပ်ပေးရတာပါ။ ဒါကြောင့် Pump မဝင်ခင် တပ်ပေးရပါတယ်။
Flexible Connections က Pump က Vibration Pipe ကိုမကူးအောင် တားထားပေးတဲ့ သဘောပါ။ Pumps က rotating machine မို့ Vibration ဖြစ်ပါတယ်။
Reducers က ပိုက်အရွယ် အစားနဲ့ Pump Connection Sizes တွေ မတူတဲ့ အခါ သုံးဘို့ပါ။ တစ်ခု သတိထားရမှာ က Pump Suction အတွက် Top Flat Eccentric Reducer သုံးဘို့ပါ။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ပိုက်ထဲမှာ Air Pocket မပေါ်စေဘို့ပါ။
Check Valve က တစ်ဘက်ထဲ စီးစေ မဲ့ One Direction Water Flow ဖြစ်စေဘို့ပါ။ ဒါကြောင့် Pump အထွက်ဘက်မှာ တတ်ပေးရပါတယ်။ ဒါမှ ပိုက်ထဲကရေတွေ ပြောင်းပြန် ပြန်စီးမလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Pressure Gauges ကတော့ Water Pressure ကိုသိဘို့ပါ။ Pump Performance ကို ခန့်မှန်းလို့ ရအောင်ပါ။ Suction ဘက်မှာတတ်ထားတဲ့ Gauge က Strainer ပိတ်နေ၊ မပိတ်နေ ကို လည်း သိစေ နိုင်ပါတယ်။
လူစောင့်မလိုပဲ သူ့ အလိုအလျောက် မောင်းနိုင် ရပ်နိုင်အောင် Automatic Control လုပ်နိုင်တဲ့ Control Panel တွေ တတ်ဆင် ထားပေးရပါသေးတယ်။
ရေကန် တွေ မှာ Floatless Level Sensors တွေ တပ်ထားမယ်။ သူနဲ့ အတူ Pump ကိုမောင်းပေးမဲ့ level controllers တွေ တပ်ဆင် ထားပေးရပါမယ်။
အပေါ်ကန်မှာ ရေနည်းလာရင် မောင်းတင်မယ်။
အောက်ကန် မှာ ရေ (Pump မောင်းလို့ မရလောက်အောင်) အရမ်းနည်း နေရင် Alarm
အပေါ်ကန် မှာ ရေလျှံသွားရင် Alarm
Pump Fault ဆိုရင် Alarm
စသည်ဖြင့်ပါ။ အများအားဖြင့် Pump အပိုတစ်ခု ဆောင်းထားပြီး အပြန်အလှန် Duty ယူဘို့ လည်း လုပ်ထားပေးရပါတယ်။
Cut-in and Cut-out Pressure သတ်မှတ် ထားပြီး Pressure Sensors တွေနဲ့ မောင်းတာ ရပ်တာ လုပ်ရပါတယ်။
Pressure က Cut-In Pressure ထိကျလာပြီဆိုရင် မောင်း
Pressure က Cut-Out Pressure ထိတက်လာပြီဆိုရင် ရပ်
စုတ်ယူတဲ့ ရေကန် မှာ ရေ (Pump မောင်းလို့ မရလောက်အောင်) အရမ်းနည်း နေရင် Alarm
Pressure မှာ Standby Cut-in ဆိုတာပါ ထည့်ပြီး High Demand (or) Duty Pump failure ဖြစ်တဲ့ အခါ အကူ Pump မောင်းဘို့ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Pump တွေရဲ့ Characteristics တွေ က လည်း အထိုက်အလျောက် အသေးစိတ်ပြီး နက်နဲပါတာမို့ နောက်ကြုံတဲ့ အခါ သီးသန့် တင်ပြပေးပါမယ်။
Pressure Reducing Valves Assembly(ရေဖိအား လျှော့ ဗားအတွဲ )
Standard Pressure Reducing Valve Assembly for Domestic Water Systems ပုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Pressure Reducing Valve Fault ဖြစ်ရင် ယာယီ သုံးဘို့ Globe Valve တပ်ဆင်ထားတဲ့ Bypass ပါဝင် ပါတယ်။ (Globe Valve က Throttle ထိန်းညှိလို့ ကောင်းပါတယ်။ Bypass တွင် Gate valve မသုံးရပါ။)
ဒီ arrangement ကို လည်း အလွတ်ရထားသင့်ပါတယ်။ ရှေ့နောက် သူ့နေရာနဲ့ သူ ရှိမှ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်မှာမို့ပါ။
ရွေးချယ်တဲ့ အခါ သတိထားရမှာ က Cavitation Effect ပါ။ Cavitation ဆိုတာက စီးနေတဲ့ ရေထဲ မှာ ပလုံစီ လာတာ ကို ခေါ်တာပါ။
Pump တွေမှာ Cavitation ဖြစ်တာ ကိုတော့ တော်တော်များများ သိကြပေ မဲ့ valve တွေမှာ Cavitation ဖြစ်တာ ကိုတော့ သိပ်သတိ မထားမိ တတ်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Pressure Reducing Valve တွေမှာ Cavitation မဖြစ်အောင် အရမ်း ဂရုစိုက် ရပါတယ်။
High pressure drop နဲ့ Low outlet pressure ဆိုတဲ့ Factors (အချက်) နှစ်ချက် ပေါင်းလိုက် တဲ့ အခါ Cavitation ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေ မှာ Fluid ရဲ့ Pressure က သူ့ Vapor Pressure အောက် ရောက်သွားတာ မို့ Bubbles လေးတွေ ပလုံစီ လာပါတယ်။ ဒီ Fluid Flow Stream မှာပဲ Pressure က Vapor Pressure အထက်ပြန် တက်လာတဲ့ အခါ ပလုံစီ နေတဲ့ Bubbles လေးတွေ ပြန် အရည်ထဲ ပျော်ဝင် ဘို့ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဒီ Bubbles နေရာ ကို အရည်က အရှိန် နဲ့ ဝင် extremely high impact forces တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအခါ Valve ကိုသာမက အနီးအနား က Pipe တွေကို ပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်စားပါတော့ တယ်။ Pump တွေမှာ Cavitation ဖြစ်တဲ့ အခါ Impellers တွေ တွန့်လိမ် ကောက်ကွေး၊ လိပ်၊ ပျက်စီး သွားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
ဒီလို Cavitation ဖြစ်တဲ့ အခါ ပိုက်ထဲ မှာ ကျောက်စရစ် ခဲ တွေ စီးသွား သလို အသံ နဲ့ တုန်ခါ မှု ကို ပါ ဖြစ်စေပါတယ်။
Pressure Reducing Valve က ဖြစ်နိုင်တဲ့ Cavitation Chart နမူနာ ကို အောက် မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Water Supply နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှီငြမ်းစရာ အချို့ ကိုအောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Pipe Sizing Chapter, ASHRAE Handbook : Fundamentals
Service Water Heating Chapter , ASHRAE Handbook : HVAC Applications
Singapore PUB : "Handbook on Application for Water Supply " Free Download
CP48 : 2005 "Code of Practice for Water Services"
Note: Refer to CP48: 1998 with amendments 1&2 for Pipe Sizing,
- CP48:2005 excludes those chapters.
S Y A B A S: Guidelines Of Water Supply Application
P U A S Guide : Garis Panduan Pengemukaan, Sistem Bekalan Air Di Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Putrajaya
Hansgrohe : Designer faucets[ http://www.hansgrohe.com/ ]
Duravit[ http://www.duravit.com/ ]
Dornbracht[ http://www.dornbracht.com/ ]
TOTO Sanitaryware[ http://www.totousa.com/ ]
GEBERIT[ http://www.geberit.com/ ]
Ariston[ http://www.ariston.com/ ]
A. O. Smith Water Heaters[ http://www.hotwater.com/ ]
Calorex Heat Pumps[ http://www.calorex.com/ ]
Rheem: Heating, Cooling and Water Heating Products[ http://www.rheem.com/ ]
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 11:31 PM Labels: MEP Design, Water Supply